Mcommerce Iri Kukura mazana maviri muzana nekukurumidza kupfuura Ecommerce | Martech Zone
Unoyeuka here chinhu chekutanga chawatenga pane yako nharembozha? Handina chokwadi chaizvo pandakatanga kutenga nharembozha yangu, ndiri kufungidzira kuti zvaive kuburikidza neAmazon kana Starbucks nharembozha. Kutenga nharembozha kwaive nemipimo yakati wandei - imwe yaive iko nyore kwekushandisa uye tekinoroji, imwe yacho yaingovimba nekutengeserana. Kutenga nharembozha ikozvino kuve kwechipiri hunhu, hazvo, uye iyo nhamba kubva kuCoupofy zvionere.
Muchokwadi, nepo e-commerce ichitarisirwa kukura ne15%, nhare yekutengesa inotarisirwa kukura ne31% mu2017!
Kutenderera pasirese, Japan, United Kingdom neSouth Korea inotungamira kukura pamwe neinosvika 50% gore pamusoro pegore. Australia neNetherlands dzakura mafoni kutengeserana ne35%.
Muna 2015, makambani mashanu epamusoro akaona kukura kwakawanda mukutengesa nhare ndeyeGOME Magetsi Zvishandiso zvine 634%, Nebraska Furniture Mart ine 500%, Yihaodian ine 456%, VIPShop Holdings ne451% uye HappiGo ine 389%.
Iwo makuru evanotengesa mafoni vanopa muUS ndiThiketMaster, Apple, Target, QVC uye maKohl's (nenzira iyoyo). Zvinotoshamisa kuti Amazon haisati iri mune yepamusoro 5! Vese vatengesi ava vaona yakakomberedza 50% kukura mune traffic traffic uye kutengesa. Pane chiyero chepasirese, e-commerce mutungamiri EBay inoenderera mberi nekutarisa pakuita kuti zvive nyore kune vatengi kutenga pamafoni efoni uye mapiritsi sekukosha kwekutenga kubva kumidziyo iyi yakakura 21% gore rega.
Avhareji Yekukosha Kwekukosha paKutya ichiri Yakakwira neVashandisi veTebhureti
The avhareji kukosha kukosha wepa tablet shopper iri $ 100 nepo mushopu kubva kushanduro ye smartphone iri $ 85 paavhareji. Zvakare, vatengesi venhare kubva kuApple smartphone vanozivikanwa kuve neodha yavo kukosha 22% yakaderera pane vamwe vavo iOS. Nekudaro, kune katatu zvakapetwa kupfuura vatengi pane zvishandiso zveApple. Izvo zvinopfuura zvakakwana kuti uve nechokwadi chekuti ruzivo rwako runoshanda pane iOS uye Android.
Tags: Amazonapuroavhareji kukosha kukoshacoupofyebayecommercewepasi rose m-commerceglobal mcommerceJapanikohlskutengeserana kwenharekukosha kukoshaQVCChammhembe KoriaStarbucksHwendefa maringe nharembozha yekukoshachinangwaTikitiMasterUnited Kingdom
5 Nzira Snapchat Inogona Kushandiswa kusimudzira Bhizinesi Rako
Insert: Codeless Mobile App Engagement Zvimiro